10 Kufamba Zvikanganiso Iwe Unofanirwa Kudzivisa MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Kufamba Zvikanganiso Iwe Unofanirwa Kudzivisa MuEurope
Kana iwe uri kuronga yako yekutanga rwendo kuenda kuEurope, pane zvinhu zvishoma zvaunoda kuziva nezve zvakanyanya maguta dzakanaka munyika. isu takagadzira gwara rakaringana re 10 zvikanganiso zvekufamba iwe zvaunofanirwa kudzivirira muEurope. Rwendo rwenyika yenyika yema castles, zvinonaka chikafu, mapaki emunyika, uye nzvimbo dzinoyevedza, inogona kuva imwe yezororo risingakanganwiki iwe unenge uine. Kwete, inogona zvakare kuita ngano yakaipa uye kuva nemhedzisiro yakaipa, kana usati wanyatsogadzirira.
Kunyangwe iwe uri kuenda kuEurope kekutanga kana kudzoka, aya matipi achaita kuti rwendo rwako ruve rwakachengeteka, kunyanya kugadzikana, uye zvechokwadi epic.
1. Kwete Kushanyira Madiki Maguta Uye Kunze-Iyo-Yakarohwa-Nzira Nzvimbo
Kana rwuri rwendo rwako rwekutanga kuenda kuEurope, ipapo uri kunyatso kunanga kunzvimbo dziri kutaurwa nemunhu wese. zvisinei, kana iwe uchida kutsvaga yakakosha Europe, then not visiting small villages and known cities are one of the travel mistakes to avoid in Europe. You should plan your trip to the most unforgettable off the beaten path places in Europe.
Ehe saizvozvo, kana iwe uchida kuona uye uine iwo akafanana mapikicha semamwe mamirioni evashanyi akazara mumigwagwa yeParis, Milan, uye Prague, wobva watevera mhomho. asi, kana iwe uine mweya wekutsvaga, uye kutsvaga ayo anokosha akavanzwa, ndokubva ronga rwendo rwako kutenderera misha midiki uye yakasarudzika muEurope.
Florence kuMilan Chitima Mitengo
Milan kuFlorence Chitima Mitengo
Venice kuMilan Chitima Mitengo
2. Kufamba Zvikanganiso Iwe Unofanirwa Kudzivisa MuEurope: Kwete Kushandisa Veruzhinji Zvifambiso
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvinouya mupfungwa paunonzwa zvifambiso, kwakazara uye kunopisa mabhazi, mitsetse, uye traffic. zvisinei, kutakura veruzhinji muEurope hakusi mabhazi chete asi matramu nezvitima. Vamwe vashanyi vanosarudza kuroja mota, kupfuura kuenda, asi zvifambiso zveruzhinji muEurope zvakasununguka kwazvo, kubata nguva, chipa, uye yakakurudzirwa.
Iwe unogona kusvika nyore nyore kunzvimbo dziri kure kwazvo dzeEurope, zvinoshamisa zvisikwa zvisikwa, nematende, uye mukare maonero, nechitima. Hapana nzira iri nani yekufamba famba muEurope kupfuura nechitima, inguva izere uye mari saver.
Vienna kuenda kuSalzburg Chitima Mitengo
Graz kuSalzburg Chitima Mitengo
Linz kuSalzburg Chitima Mitengo
3. Kwete Kuwana Inishuwarenzi Yekufamba
Ehe, maguta European nderimwe remaguta akabudirira uye akachengeteka kwazvo pasi rese. asi, uchiri munhu, uye mawere muma park emunyika eEurope ane mawere uye haana tsitsi. Nepo iwe uchigona kuve unonyanya kuve unofamba uye mufambi, unogona kubata dzihwa, kumonyanisa gumbo, kana kubiwa kamera yako.
Inishuwarenzi yekufamba muEurope yakakosha kune hutano uye zvimwe zvikonzero zvekufamba. Kuwana inishuwarenzi yekufamba muEurope inofanirwa, uye haufanire kuchengetedza pane izvo zvinodiwa. Kusawana inishuwarenzi yekufambisa chikanganiso chaunofanirwa kudzivirira paunenge uchienda kuEurope nekuti zvinogona kukubhadharira mari zhinji.
Marseilles kuLyon Chitima Mitengo
Paris kuenda kuLyon Chitima Mitengo
Lyon kuParis Chitima Mitengo
Lyon kuAvignon Chitima Mitengo
4. Kufamba Zvikanganiso Iwe Unofanirwa Kudzivisa MuEurope: Kwete Kutenga Matikiti Pamberi
Europe inodhura. Kunyangwe iwe uri kuenda kunzvimbo dzinodhura kwazvo, mamiziyamu uye matikiti ekukwezva ari kuzokubhadharira mari diki. Kusatenga matikiti pamberi ndeimwe yemakanganiso makuru ekudzivirira muEurope, mamirioni evashanyi anoshanyira Europe gore rega rega, ichavimbisa iwe kuti.
saka, iwe unogona kuwana makuru madhiri kune eEuropean iconic saiti, zvinokwezva, uye mabasa, kana iwe uchitsvaga uye bhuku pamberi. Dzimwe nguva unogona kuwana madhiri makuru chaizvo kungoita ne kutenga matikiti online, uye inokusevha yakanyanya kukosha nguva parwendo rwako. Pamusoro pe, kana rwuri rwendo rwako rwekutanga kuenda kuEurope, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira mitsetse mirefu. saka, kutenga matikiti ekufamba uye ekukwezva pamhepo kuchakuchengetedza kubva pakumira mumvura inonaya, kupisa zhizha mazuva, uye inokusiira iwe nguva yeizvozvo maonero uye pikiniki.
5. Kuchinjana Mari Panhandare
Kuenda kune imwe nyika kunogona kunetsa, kusataura mutauro kana kutsvaga nzira yako kutenderera guta. Kubata bhajeti yako uye mari yekunze kunogona zvakare kunetsa. Nepo kuchinjana mari panhandare kunenge kusununguka uye kwakavimbika, ndiyo imwe yenzira dzekufamba dzekudzivirira muEurope.
Iyo fizi yauchadaro kubhadhara uye kuchinjana mari zvichakubhadhara iwe, saka zvakanak kuita tsvagiridzo yako online pa ekuchinjanisa mapoinzi. wo, unogona kugara uchibvunza muhotera yako yekugamuchira, ivo vanofara kukurudzira anovimbika emari mapoinzi munharaunda. Zvinokurudzirwa kuchinjanisa zvakakwana zverwendo kubva kunhandare, uye huwandu huchafukidza wekutanga 1-2 mazuva erwendo rwako.
Paris kuenda kuRouen Chitima Mitengo
Paris kuenda kuLille Chitima Mitengo
Rouen kuBrest Chitima Mitengo
Rouen kuLe Havre Chitima Mitengo
6. Kubhuka Kugara Mune Yakashata Nharaunda
Nzvimbo ndechimwe chezvinhu zvakakosha mukugadzira zororo rakanaka mu Europe. Kwete kuita yako research pane yakanakisa chikamu cheguta, nharaunda, kana musha wekugara, iko kukanganisa kudzivisa kana uchifamba muEurope. Kusarudza nzvimbo yekugara kwako kwakakosha sekusarudza nzvimbo yekugara. Kugara munzvimbo isiriyo yeguta kunogona kukubhadharira iwe panguva yekufamba, motokari, mutengo, uye kuchengetedzeka.
7. Kufamba Zvikanganiso Iwe Unofanirwa Kudzivisa MuEurope: Kudya MuIresitorendi Yekutanga Unoona
Kana iwe uri mushanyi chaiwo, ipapo uchaenda kumaketani akakurumidza-ezvikafu zvekudya kwemasikati kana yekudyira yekutanga munzira yako. zvisinei, ungarasikirwa neanoshamisa maresitorendi, neakanakisa madhiri emuno nemaonero anozotora mweya wako kure.
Kana iwe uchingopa imwe nguva yekutsvaga pamberi perwendo rwako, iwe uchazvibata iwe kune chisingakanganwike chiitiko chekugadzirira. kunze, kuyedza chikafu chinonaka, unogona kuchengetedza mashoma madhimoni, pachinzvimbo chekutsvaira muresitorendi yekutanga kutenderera. Kofi huru, pastry, chikafu cheko, uye zvinonakidza ndiro pamitero inonakidza, inogona kunge ichitenderedza kona.
8. Kunamatira Kune Bhuku Rinotungamira Pane Kupfuura Yemahara Guta Rokufamba Rwendo
Iri bhuku rinotungamira sosi huru yekurudziro yerwendo rwekuEurope, uye nezve kuva nezveruzhinji chirongwa chekufamba. zvisinei, kunamatira kubhuku rako rinotungamira ndechimwe chezvikanganiso zvakakura zvekufamba zvekudzivirira muEurope. Zvinoreva kuti iwe unoshanyira nzvimbo dzakafanana nemamiriyoni evamwe vashanyi, uye semushanyi.
Kuziva iro guta pane kufamba kwekusununguka ndiyo nzira yakanakisa kunakidzwa zvikuru nakisisa maguta muEurope. Yemunharaunda inotaura Chirungu gwara rinokutora iwe kutenderera guta. Mukuwedzera pakuratidza nzvimbo dzakakurumbira uye dzakakurumbira, iro guta rinofamba gwara rekushanya richakutaurira zvakavanzika zvakachengetedzwa zveguta uye nekukupa iwe mizhinji yemazano uye matipi eguta. izvi zvinosanganisira mazano ezvekudya, madhiri makuru, nzvimbo dzakavanzika, uye zvakanyanya kukosha nzira yekugara wakachengeteka.
9. Kufamba Zvikanganiso Iwe Unofanirwa Kudzivisa MuEurope: Kwete Kurongedza KuEurope
Zuva, naya-naya, chilly, kana nyorova, chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya nezve Europe ndechekuti iwe unogona kuona zvese 4 mwaka pazuva. saka, kwete kurongedza yakanangana nemamiriro ekunze eEurope kukanganisa kwekufamba kunodzivirira pazvose.
T-shirts, mvura nejasi remhepo, shangu dzakanaka dzinongova dzakakosha kurongedza rwendo rwako kuenda kuEurope. Zvakanakisa kurongedza uye kupfeka materu, nenzira iyi unenge wakasununguka mune chero mamiriro ekunze, uye haizotakure kutenderedza wadhirobhu yakazara.
10. Kuchengeta Mari Yako Mune Imwe Nzvimbo
Maguta eEurope anozivikanwa nekushamisa, asiwo zve kunhonga, misungo yevashanyi, uye zvirongwa zvakasiyana zvekubiridzira vashanyi. Kudhiraivha bhajeti yako yekufamba pakati rwendo rwako rwezuva bhegi, ngozi, uye kadhi rechikwereti ndiyo nzira yakanakisa yekufamba zvakachengeteka uye kunakidzwa.
Zvakanakisisa kugara parutivi rwakachengeteka uye kudzivisa kuchengeta yako mari uye kiredhiti kadhi munzvimbo imwechete. saka, kuva nezvinhu zvako zvinokosha nguva dzose nenzvimbo, iko kukanganisa kwekufamba iwe kwaunofanirwa kudzivirira muEurope.
Kupedza, kune dzakawanda nzvimbo dzakanaka dzekuwana muEurope. Unogona kupedza vhiki rinoshamisa kana kuronga rwendo rurefu rweEuro, mikana yacho haiperi. asi, paunenge uchienda kune imwe nyika, mitemo yemutambo inosiyana kubva kuguta neguta. Chinhu chete chinoramba chakangofanana kukanganisa kwevashanyi vanoita rwendo rwese rwumwe chete. Wedu 10 kufamba zvikanganiso zvekudzivirira muEurope, inokuchengetedza iwe uye ita kuti rwendo rwako runyatsove rwakasiyana.
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira kuronga kwako zororo kuEurope kwesarudzo yako nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Kufamba Zvikanganiso Iwe Zvaunofanira Kudzivisa MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-mistakes-avoid-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura iyo / pl ku / tr kana / de uye mimwe mitauro.